बादलमा आउनुहुने ख्रीष्ट र अन्तिम इन्साफ
दोस्रो आगमन र अन्तिम इन्साफ
सेप्टेम्बर 27, 2017 जुन 17, 2020 rio550770दोस्रो आगमन र अन्तिम इन्साफ मा2टिप्पणीहरु
ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू
के ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नै अन्तिम इन्साफको दिन हो त ?
बाइबलमा, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका मानिसहरूलाई मुक्तिमा डोर्‍याउन बादलमा आउनुहुन्छ भनेर अगमवाणी गरिएको छ । परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज आन साङ होङज्यू नै बाइबलको अगमवाणीअनुसार “बादल”मा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्दछ ।
आजभोलि संसारका ख्रीष्टियानहरू अगमवाणीअनुसार आउनुहने मुक्तिदाता ख्रीष्टलाई, आकाशको प्राकृतिक बादललाई हेर्दै पर्खिरहेका छन् ।
“त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महा महिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन् । जब यी कुरा हुन थाल्छन् तब खडा होओ र आफ्नो शिर माथि उठाओ, ’cause तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ ।”
यहाँ येशूज्यू दोस्रो पटक पृथ्वीमा आउनुहुँदा सबैले देख्ने गरी बादलमा आउनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ । तर, के ख्रीष्ट साँच्चै प्राकृतिक बादलमा आउनुहुने हो त ? ख्रीष्टियान भएकोले, बादलमा आउनुहुने ख्रीष्टको अर्थ स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ ।
संसारका ख्रीष्टियानहरूले येशूज्यू बादलमा आउनुहुँदा, संसार तुरुन्तै नष्ट हुन्छ । अनि सन्तहरूचाहिँ स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नेछन् भनेर विश्वास गर्दै सिकाउने गर्छन् । तर धर्मशास्त्रलाई नियालेर हेर्ने हो भने, येशूज्यूको दोस्रो आगमन र अन्तिम इन्साफ दुई फरक आगमन हुन् ।
बादलमा आउनुभएको येशूज्यू
बाइबलमा देस्रो आगमनका ख्रीष्ट आकाशको बादलमा आउनुहुन्छ भनिएको छ । प्रथम आगमनका ख्रीष्टको विषयमा पनि उस्तै अगमवाणी गरिएको थियो । आजभोलि, येशूज्यू मानिसको स्वरूपमा आउनुभएको कुरा सबैलाई थाहा छ ।
“राती मैले मेरो दर्शनमा हेरें, र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनुभएको एक जना मानिसको पुत्रजस्तै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ ती अति प्रचीनकहाँ आउनुभयो, र उहाँकै सामु उपस्थित गराइनुभयो । उहाँलाई अधिकार, महिमार सार्वभौमिक शक्ति दिइयो, र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उहाँको आराधना गरे । उहाँको प्रभुत्व अनन्तसम्म रहने प्रभुत्व छ, जुनचाहिँ कहिल्यै टल्नेछैन, र उहाँको राज्य त्यो हो, जुन कहिल्यै नष्ट हुने छैन ।”
येशूज्यू नै, दनिएलले आफ्नो दर्शनमा, बादलमा आइरहनुभएको देखेका मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, येशूज्यू मानिसको स्वरूपमा आउनुभयो । उहाँ मरियमको शरीरद्वारा बालकको रूपमा जन्मनुभयो । मत्ती, यूहन्ना र लूकाले आफ्नो पुस्तकमा येशूज्यूलाई अधिकार(मत्ती २८:१८), महिमा(यूहन्ना १७:१०) र सार्वभौमिक शक्ति(लूका २२:२९) दिइयो भनेर लेखेका छन् ।
२,००० वर्षअघि, पुरानो करारको अगमवाणीअनुसार, येशूज्यू आकाशको प्राकृतिक बादलमा नभई मानिसको स्वरूपमा आउनुभयो । बाइबलमा येशूज्यू बादलमा आउनुहुन्छ भनेर वर्णन गरेको चाहिँ, बाइबलमा “बादल” भन्ने शब्द मानिसलाई सङ्केत गर्दछ ।
बादलले शरीरलाई जनाउँछ
बाइबलमा एउटै शब्दको धेरै अर्थहरू छन् । आकाशको प्राकृतिक बादलबाहेक, बाइबलमा “बादल” लाई फरक तरिकाले वर्णन गरेको छ ।
तिमीहरूका प्रीतिभोजमा यिनीहरू कलङ्क हुन् । किनकि यिनीहरू आफ्नै मात्र ख्याल राखी धन्दै नमानी बेसरी खान्छन् र पिउँछन् । तिनीहरू बतासले उडाइलैजाने पानीविनाको बादलसरह छन्, हिउँदका फलहीन वृक्षजस्ता, जो दुई पल्ट मरिसकेका र जरैसमेत उखेलिएका हुन्छन् ।
बाइबलमा बादलले मानिसको शरीरलाई सङ्केत गर्दै, मानिसलाई बादलसँग तुलना गरेको छ ।
यो नयाँ करारमा मात्र नभएर, पुरानो करारमा पनि देखा परेको छ ।
झरीविना बादल र बतासझैँ आफूले नदिएको दानमा धाक लाउने मानिस हुन्छ ।
पुरानो करारमा पनि “बादल”ले “मानिस”लाई सङ्केत गरिएको छ । अन्य धेरै उदाहरणहरू भए पनि, यी दुई वचनहरूद्वारा मात्र पनि बाइबलमा बादलले मानिसलाई सङ्केत गरिएको कुरा देख्न सकिन्छ ।
येशूज्यूको देस्रो आगमन र अन्तिम इन्साफ
धेरै मानिसहरूले येशू्ज्यूको देस्रो आगमन नै अन्तिम इन्साफ हो भनेर विश्वास गरेको भएपनि, यी दुई फरक छन् । अन्तिम इन्साफमा, बाइबलमा येशूज्यू बादलमा नभई, बल्दो आगोमा आउनुहुन्छ भनेर भनिएको छ ।
हेर, परमप्रभु अग्निसाथ आउँदैहुनुहुन्छ, र उहाँका रथहरूचाहिँ आँधीबेहरीझैँ छन् । आफ्नो रीस झोँकसित र आफ्नो हप्काइ आगोको ज्वालासित उहाँले ल्याउनुहुनेछ । किनकि आगो र तरवारद्वारा परमप्रभुले सबै मानिसको न्याय गर्नुहुनेछ, र परमप्रभुबाट मारिएकाहरू धेरै हुनेछन् ।
यो तब हुन्छ, जब प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुनेछ । परमेश्वरलाई न चिन्नेहरूलाई र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ । तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड …
२ थेसलोनिकी १:७-९
पुरानो र नयाँ दुवै करारमा, येशूज्यू अन्तिम इन्साफको दिनमा अग्निसाथ आउनुहुन्छ भनिएको छ । ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र अन्तिम इन्साफ फरक भएकोले, परमेश्वरका मानिसहरू अन्तिम इन्साफको तयार गर्न, सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूको उद्धार नजिकै(लूका २१:२८) ल्याउनको निम्ति उहाँ पहिला मानिसको स्वरूपमा आउनुपर्छ । उद्धार ल्याउनको निम्ति पहिला ख्रीष्ट मानिसको रूपमा आउनुपर्छ ।
परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज बाइबलको अगमवाणीअनुसार मानिसको रूपमा आउनुभएका दोस्रो आगमनका ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ । ख्रीष्ट कसरी आउनुभयो भन्ने सन्दर्भमा, मण्डलीले उहाँको आगमनको विषयमा पनि शिक्षा दिँदछ ।
ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू, विश्वास, सत्यता
Previous Post Previous post: स्वर्गको परिवारको प्रणाली
Next Post Next post: दक्षिण कोरियाबाट आउनुहुने दोस्रो ख्रीष्ट
2 thoughts on “दोस्रो आगमन र अन्तिम इन्साफ”
Kishor Subba भन्नुहुन्छ:
मे 24, 2018 मा 5:26 अपराह्न
Thanks to God the Father and God the mother for coming to this earth to save us the mankind.
अक्टोबर 26, 2018 मा 10:41 बिहान
बाईबलको अगम्वाणी अनुसार पिता आन साङ होङ ज्यु दोस्रो पटक शरीर धारण गर्नुभई १९४८ मा यस पृथ्वीमा आउनु वप्तिस्मा लिनुभएर इ.स. ५३८ देखि इ.स. १७९८ सम्म सैतानले हटाएको सम्पूर्ण बाईबलको सत्यताहरु खोजिदिनु भएर स्वर्गको बाटोतिर दोर्याउनुहुने साचो र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ । अब अन्तिम आगमनको प्रतिक्षा हामी सियोनाका सन्तानहरुले गरिरहेका छौ । लामो समय छैन । सबैजनाले छिटो बुझ्नुहोस् ।
परमेश्वरतिर फर्काउने सत्यता, निस्तार–चाड
चाड पालन गरिने ठाउँ, सियोन
स्वर्गको परिवार र पृथ्वीको परिवार
दोस्रो आगमनका ख्रीष्टको चिन्ह, र उहाँलाई चिन्ने तरिका
Dil Bahadur Shrestha मा परमेश्वरतिर फर्काउने सत्यता, निस्तार–चाड
Saroj tamang मा दोस्रो आगमनका ख्रीष्टको चिन्ह, र उहाँलाई चिन्ने तरिका
Dil मा बप्तिस्माचाहिँ तुरुन्तै
Anjan मा दोस्रो आगमन र अन्तिम इन्साफ
Anjan मा दोस्रो आगमनका ख्रीष्टको चिन्ह, र उहाँलाई चिन्ने तरिका
वर्गहरु वर्ग छान्नुहोस उपलब्धिहरू ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू ख्रीष्टियान आवश्यकता गतिविधिहरू छिमेकीसँगको प्रेम पुरस्कारहरू प्रवचन माता परमेश्वर रक्तदान अभियान विपत्ति राहत विश्वास सत्यता सर-सफाई अभियान
Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com